Ruushka oo Jabsaday Doorashadii Mareykanka ka dhacday!! | kowtharmedia.com
Home WARAR Ruushka oo Jabsaday Doorashadii Mareykanka ka dhacday!!
Ruushka oo Jabsaday Doorashadii Mareykanka ka dhacday!!
Dec 10, 2016WARAR
Ka dib markii madaxweyne Obama uu hadalkan shalay ku dhawaaqay ayaa laba ka mida wargeysyada ugu waaweyn dalkan Maraykanka waa New York Times iyo Washington Post waxay qoreen in Ruushku uu faro geliyey doorashada Maraykanka si uu u gacansiiyo Donald Trump.
Wargeyska New York Times ayaa ku waramay in Ruushku u dhacay computero ay lahaayeen guddida dhexe ee xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimoqraadigaba, laakiin ay sii daayeen oo keliya xogihii ay ka xadeen dimoqraadiga.
Sarkaal sare oo ka tirsan maamulka xukuumadda Obama oo magaciisa qariyey ayaa u sheegay wargeyska New York Times, inay kalsooni buuxda ku qabaan in Ruushku ay jabsadeen xarumaha dhexe ee Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimoqraadiga, isla markaana aanay sii daynin xogihii ay ka xadeen xisbiga Jamhuuriga.
Wargeyska ayaa sheegay in hay’adaha sirdoonka Maraykanku inay aqoonsadeen shakhsiyaad Ruush ah oo loo aanaynayo weeraradii dhinaca internetka, hase ahaatee aan weli cidna wax tallaabo ah laga qaadin.
Wargeyska Washington Post ayaa isagu sheegay in CIA ay aaminsan tahay in Ruushku ay farogeliyeen doorashadii dalkan Maraykanka si ay Trump uga caawiyaan inuu guulaysto, waxaana sarkaal aanay magaciisa sheegin uu wargeyska u sheegay in xogaha la soo bandhigayey ay u xaglinayeen hal murashax isla markaana lagaga soo horjeeday mid kale.
Previous PostDaawo Sawirro: Shariif Xasan oo sameeyay Qorshe aan lagu kala fur furi karin Xildhibaanada Baydhabo lagu doortay iyo qol wthasapp uu sameeyay! Next PostDaawo: Ciidanka Daacish qandala ka xureeyay ma ahayn Ciidnka Putland ee waxay ahaayeen Ciidamo taabacsan Hogaanka Gobalka Bari uu Hogaamiyo Galan!